Kedu ihe bụ atụmatụ dị elu maka nyiwe SaaS iji too | Martech Zone
Kedu nọmba gị lekwasịrị anya dị ka ụlọ ọrụ SaaS? Uto, n'ezie. Skyrocketing ịga nke ọma na-atụ anya n'aka gị. Ọ dị mkpa na ndụ gị ogologo oge:
Ọbụlagodi na ụlọ ọrụ sọftụwia na-eto eto na 60% kwa afọ, ohere ọ ga-abụ ibu ọtụtụ ijeri dollar adịghị mma karịa 50/50.
McKinsey & Companylọ ọrụ, Too ngwa ngwa ma ọ bụ nwụọ nwayọ
Ọnwa na-eto eto dị mkpa iji kpuchie ihe nfu site na ụlọ ọrụ SaaS. Iji merie atụmanya ma debe gị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ oge iji nweta usoro gị maka uto na 2019. E nwere usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ, usoro aghụghọ ịbido ibu, yana ngwaọrụ iji nyere gị aka bulie uto gị.
Atụmatụ uto nke SaaS
Ndị a bụ usoro ọhụụ ọhụrụ maka ịkwalite uto maka sọftụwia dị ka nyiwe Ọrụ (SaaS).
Kwọ ụgbọala na Awamepụta Mmata
Inweta ọdịnaya ziri ezi n'ihu ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị - Dịka o nwere ike ịbụ na ị nụla, ọdịnaya bụ eze ma ka dị, ọkachasị SaaS. Ndị ọrụ na-atụ anya ọtụtụ ozi na-enyere ha aka ịme mkpebi ịzụta ma na-atụ anya ka akara gị nwee ikike dị elu. Zụlite ọdịnaya kwesịrị ekwesị na-adọta ma na-eme ka ndị ahịa nwere ike itinye aka dị mkpa. Nwere ike iji ngwaọrụ dịkaSpyfu na Nchịkọta Atụmatụ Google iji chọpụta ihe isiokwu gị dị elu bụ, ihe ndị na-ege gị ntị na-achọ. Atụmatụ ole na ole na-ekekọrịta ọdịnaya gị dị ka akwụkwọ ọbịa na blog ọzọ yana ndị na-ege ntị yiri ya, na-eji nyiwe dị ka ọkara na mbipụta, yana iji mgbasa ozi na ịkwalite n'ihu ndị ziri ezi.
Iji Emeka Onwe Onwe - Uzo a na-elegharakarị anya na-eto eto na-eji akara aka nke ndị guzobere gị na ndị ọkachamara nọ na otu gị iji rute ndị na-ege ntị. Ndị mmadụ na-enwe mmekọrịta iso na-amụ ihe site na ezigbo ndị mmadụ na ịntanetị. Ọ bụrụ na onye otu gị nwere nka ma ọ bụ nka nwere ike inye gị ozi na-enye aka, ọ bụ ụzọ dị mma iji kwalite akara gị n'echeghị eche. Enwere ọtụtụ ndị guzobere na-ede na Ọkara, Quora, ụfọdụ nwere usoro ntanetị nke ha ma ọ bụ pọdkastị nke na-enye nghọta dị ukwuu nke ndị na-ege gị ntị ga-enwe mmasị na ya. Ọ na-ewulite ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, yana njikọ nke onwe gị na akara gị. Nanị ịkọkọrịta ihe ị maara na ahụmịhe ị nwere nwere ike inyere gị aka ijikọta ma mee ka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya.
-edu ndú Ọgbọ
Inye ngwa ma ọ bụ akụ n'efu - Usoro mmepe ọzọ dị ukwuu bụ ịnye ngwa ọrụ n'efu ma ọ bụ akụ na ebe nrụọrụ weebụ gị nke na-adọta onye ahịa gị ma na-eweghachite ha mgbe niile ma nye gị akara ikike ụfọdụ. Coschedule emeela ezigbo ọrụ na ịmepụta aCoschedule Isi nyocha nke na - enye gị ohere inyocha isi okwu maka blọgụ blọọgụ ozugbo na saịtị ha. Na mgbanwe, ha na-arịọ maka email gị. Onye nyocha nyocha na-eme ka uche zuru oke maka ndị na-ege ha ntị. Nwere ike ịmepụta ngwá ọrụ dị ka nke a maka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya iji ya ma ọ bụ na ị nwere ike ịme ihe dị mfe dịka inye nduzi otu esi eme ihe na mgbanwe email ha.
Ngwa njikarịcha mgbasa ozi - Enwere ọtụtụ ngwaọrụ ị ga - eji ga - enyere gị aka ịkwalite ụzọ ị na - eke ma na - egosipụta mgbasa ozi. Can nwere ike iji Debanye aha iji weghachite ndị ọrụ na-abịa na saịtị gị ogologo oge mgbe ha hapụsịrị saịtị gị. Ihe karịrị 90% nke ndị ọrụ batara na saịtị gị nwere ike bouncing agaghị alaghachi ọzọ. Adroll na-ezubere ha mgbasa ozi na ebe ọzọ yana onyinye na-amasị ha na saịtị gị. Ọ bụrụ na ha lere anya na ngwugwu adịchaghị, Adroll ga-elekwasị ha anya na mgbasa ozi maka mbelata ego wee weghachite ha. Karịsịa maka ihe dị ka SaaS, ọ na-ewe obere mkpebi karịa iji zụta site na ịzụta. Akụkụ dị ukwuu nke mbọ gị ga-abụ ibute ụzọ nke uche onye ahịa gị na iwebata azụ.
Boardnọdụ na Mbelata Churn
Mee ka oganihu gị na-aga n'ihu site na iji ogwe osisi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya - Akụkụ buru ibu nke na-ejigide uto na-ebelata oge mgbe ị debanyere ndị ọrụ ọhụụ. Ọ bụrụ na ị na-edebanye aha ndị ọrụ mana nnukwu pasent na-adaba na ọnwa mbụ, ị naghị eto eto ma ọlị. Nke a bụ nnukwu nsogbu maka ụlọ ọrụ SaaS. Iji gbochie afụ ọnụ, jide n'aka na ndị ọrụ maara nke ọma na ngwaahịa gị site na mmalite. Goodzọ dị mma iji jide n'aka na ndị ọrụ gafere usoro niile ị na-eme nke usoro ị na-abanye ma debe ha maka "nkuzi" niile bụ ịgụnye ndepụta nyocha ma ọ bụ usoro ọganihu. Mgbe ndị ọrụ hụrụ nke a, o yikarịrị ka ha ga-agafe usoro ahụ dum ma ghara ịhapụ ozi dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere ike, gụnye ndị na-elekọta mmadụ dịka ịtinye ndị enyi ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị. Ọ bụrụ na enwere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị ọrụ nwere ike ịlaghachi ma malite iji atụmatụ ọnụ ozugbo.Codka jamhuuriyadda soomaaliyaMụtakwuo maka imeziwanye usoro ị na-abanye.
Soro ndị ọrụ ọhụrụ na ndị na-alọghachite were mmelite - wantchọrọ idebe ndị ọrụ na ndị nwere ike iji aka gị rụọ ọrụ site na ịkpọsa mmelite gị na atụmatụ ọhụrụ iji gosipụta ndị otu gị na-arụsi ọrụ ike iji melite ngwaahịa gị. Ọ na - ewulite ntụkwasị obi na ika gị ma na - eme ka onye ọrụ nwee ntụkwasị obi mgbe ha hụrụ ka ị na - enye ihe ha rịọrọ. Gbalịa Beamer na saịtị gị ma ọ bụ na ngwa gị. Beamer bụ mgbanwe na ozi akụkọ na-emepe mgbe ndị ọrụ pịa taabụ “Gịnị bụ Ọhụrụ” na igodo gị ma ọ bụ akara ngosi na ngwa ngwa gị. Osimiri akụkụ nke mmelite na-emepe nke kachasị ọhụrụ: atụmatụ ọhụrụ, azụmahịa, mmelite, akụkọ, ọdịnaya, wdg. Ọ bụ ebe etiti ebe ị nwere ike imelite onye ọ bụla. Nwere ike iji nzipu ọkwa iji ruo ndị ọrụ na saịtị ma ọ bụ ngwa gị wee weghachite ha na mmelite na-akpali akpali. Ọ bụ a oké ụzọ mbo mbuli njikọ aka, belata afụ ọnụ, ma na-ndị “na nsọtụ” nwere ahịa na-abịa azụ.
Nzaghachi na Azụmaahịa Ndị Ọgbọ
Nakọta nzaghachi - Creatmepụta ngwaahịa SaaS na-emeri bụ usoro nke ige ndị ahịa ntị na imeghari. Mee ya otu isi na nzaghachi nke ọma site na ndị ọrụ na ọkwa niile. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ nwere ike inyere gị aka itinye nyocha na ntinye ngwa ngwa na weebụsaịtị na ngwa gị iji nakọta nzaghachi dị mfe. Nwere ike iji Beamer iji kpokọta nzaghachi: ndị ọrụ nwere ike ịhapụ mmeghachi omume ha na nkọwa ha maka mmelite kachasị ọhụrụ na ndepụta gị ka ị nwee ike ịlele nzaghachi. Nakọta nzaghachi na itinye ya na mmelite na atụmatụ ọhụrụ na-eme ka ngwaahịa gị na-agbanwe n'ụzọ ziri ezi.
Na-akpali akpali ịkekọrịta ngwaahịa gị - Iji ruo ndị na-ege ntị dị ka ndị ahịa gị ugbu a, ụzọ dị mfe bụ ịkpali ha ma mee ka ọ dịrị ha mfe ịkekọrịta ngwaahịa gị. Nwere ike ịjụ ndị ọrụ ka ha kpọkwuo ndị ọrụ iji gbanwere ihe. Na mbu, Dropbox gwara gi kesaa njikọ ha na mmadụ 5 ma ọ bụ 10 ma nweta ohere nchekwa ọzọ na Dropbox na mgbanwe. Ọ gara nke ọma. Mee ka ọ dị mfe ịkekọrịta ngwaahịa gị na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ site na email. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-eme nke a ọkachasị ma ọ bụrụ na a na-agba ya ume dị ka atụmatụ ọzọ (ebe nchekwa Dropbox), ịgbatị ikpe, ma ọ bụ ego
Usoro ntinye aka - Azọ dị mfe iji banye n'ihu ndị ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị ọrụ gị ugbu a bụ iji ndị ọrụ gị ugbu a dị ka ndị na-akwado akara gị site na mmemme mmemme. Enwere ngwaọrụ dị kaNtughariCandy na pụrụ inyere gị aka mfe melite Ntuziaka usoro maka ngwaahịa gị na gị ugbu a ọrụ na enthusiasts-enyere gị aka na-ere mgbe ha na-erite uru. Ngosipụta nke mmadụ na nyocha ndị ọgbọ dị ike; okwu ha na-eme ka ha kwenye karịa nke gị! I nwedịrị ike ịnye ndị na-ezigara gị na ndị mmekọ nwere ọdịnaya na ihe iji nyere aka ree ngwaahịa gị nke ọma. Ohere dị mma na ha nwere ohere ịnweta ndị na-ege ntị. Ha ga-agwa ha okwu n'ụzọ dị ezigbo mkpa na ezigbo ụzọ mgbe ahụ ị nwere ike ịme mgbasa ozi.
Otu n'ime ndị a dị mfe iji mejuputa naanị ole na ole nwere ike inye aka bulie uto gị ngwa ngwa na 2019. Nye ha gbaa ma gbanye ha ka ha kwekọọ na ndị na-ege gị ntị na ebumnuche gị. Tụkwasị na nke a, gbalịa Beamer dị ka ụzọ dị mfe iji bulie njikọ aka na saịtị gị yana ịka nkata nke ọma na ndị nwere ike itinye ihe na ndị ahịa ugbu a.
Nbanye maka Beamer
Tags: ad njikarịcha ngwaọrụoriọnacontent Marketingcoschedule isiokwu nyochaakụrụngwa efuibuịnyịnyambenata saas churnahịa ahịasaasnnweta saasnjigide saassoftware dị ka ọrụ
Chloe Smith bụ onye na-ahụ maka azụmaahịa yana onye na-ede oge oge na-adị njikere ịkekọrịta ndụmọdụ sitere na ndụmọdụ. O kwenyere na agụụ, obi ike na, karịa ihe niile, ihe ọmụma na-eweta ihe ịga nke ọma. Mgbe ọ naghị arụ ọrụ, ọ nwere ike bụrụ ebe ọ na-atọ ụtọ yana ezigbo akwụkwọ, yana iko lemongrass tii (ma ọ bụ na-eme ihe n'eziokwu na-ekiri ihe nkiri Netflix kachasị ọhụrụ).